Orinasa - Airpull (Shanghai) Filter Co., Ltd
Ny Factory:Ao amin'ny orinasa manana fandrakofana 15.000 metatra toradroa, misy mpiasa 145. Hatramin'ny nananganana ny orinasa, ny fampidirana mitohy ny teknolojia vaovao ao an-toerana sy any ivelany dia mamela ny famokarana sy ny fitaovana fanaraha-maso mandroso ary koa ny teknolojia famokarana tsara tarehy. Vokatr'izany dia afaka mamokatra sivana natokana ho an'ny compressor 600.000 isan-taona izahay. Tamin'ny taona 2008, ny orinasanay dia nohamarinin'ny rafitra fitantanana kalitao ISO9001: 2008. Lasa mpikambana ao amin'ny China General Machinery Industry Association. Izahay koa dia manolo-tena amin'ny fanavaozana ny vokatra vaovao. Indrindra indrindra, ny fanasarahana solika an'habakabaka dia ny vokatra novolavolainay, izay nahazo ny patanty modely azo ampiasaina navoakan'ny Biraon'ny Fananan'ny Fanjakana ao amin'ny Repoblika Entim-bahoakan'i Shina.
Fitaovana fanaraha-maso: Toeram-pitsapana fanerena
1. Andramo ny tanjaky ny fanerena amin'ny fanasarahana menaka rivotra na sivana solika.
2. Andramo ny sivana hydraulic.
Fanerena ny fitaovana: 16MPa
Ireo fitaovana fanaraha-maso ireo dia afaka manampy antsika hamantatra ireo sivana manara-penitra.
Ny birao dia natao ho madio sy mahazo aina ho an'ny mpiasa. Izy io dia natao hampitomboana ny fahombiazan'ny hazavan'ny andro voajanahary. Noho izany, afaka mahatsapa tsara ny mpiasantsika, ary manokan-tena bebe kokoa amin'ny asa.
Atrikasa sivana rivotra:Ao amin'ny tsipika famokarana oval, ny toeram-piasana rehetra dia voatazona ho madio sy madio. Miaraka amin'ny fitantanana ny andraikitra mazava dia samy sahirana amin'ny asany ny tsirairay. Ny vokatra isan'andro dia mahatratra 450 isa.
Atrikasa sivana menaka:Ny fitantanana andraikitra mazava dia ampiharina amin'ny tsipika famokarana miendrika U. Ny sivana menaka dia amboarina amin'ny tanana sy ara-mekanika. Ny vokatra isan'andro dia 500 sekely.
Atrikasa fanasarahana solika an'habakabaka:Manana atrikasa an-trano madio roa izy io. Ny atrikasa iray dia ampiasaina amin'ny fanomanana ireo ampahany tany am-boalohany fanivanana, fa ny iray kosa dia tompon'andraikitra amin'ny fivorian'ny sivana. Manodidina ny 400 isa no azo vokarina ao anatin’ny iray andro.